'Alien 5' Tease Ga-eweghachi Sigourney Weaver's Ripley - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Alien 5' Tease Ga-eweghachi Sigourney Weaver's Ripley
'Alien 5' Tease Ga-eweghachi Sigourney Weaver's Ripley
by Trey Hilburn III June 18, 2020 1,242 echiche
O nwere ike ọ gaghị abụ "egwuregwu" maka ọbịa aha ugbu a. Sigourney Weaver kpughere na Walter Hill na David Giler dere ọgwụgwọ peeji 50 nke Weaver gụrụ ugbu a.
Ma Hill ma Giler bụ ndị na-arụkọ ọrụ ogologo oge na ọbịa aha ma chepụtala isi ọhụrụ nke a ga-ebu amụma na Sigourney Weaver laghachi na agwa Lt. Ellen Ripley. Yabụ, bido ikpeku chi nke Weaver nwere mmasị n'ihe ọ hụrụ zuru oke iji laghachi na ọrụ ahụ.
"Sigourney, dị ka o nwere site na mbido, na-adị obi umeala banyere ya pụtara ikike sere anya na echiche nke bụ ịkọ a akụkọ na scares ogologo ọkpa gị ụbọchị, kicks ịnyịnya ibu nke a ọhụrụ Xenomorph, na-eduzi a na-atụgharị uche na ma eluigwe na ala nke ọbịa aha na akara aka nke agwa Lt. Ellen Ripley ”Hill gwara Waya Syfy.
Brandywine Productions kesara ihe oyiyi nke ọgwụgwọ ahụ. Ihe mkpuchi ahụ na-ekpughe mkpado ọhụrụ nke gụrụ "Na Space Ọ dịghị onye nwere ike ịnụ gị nrọ". Ọ bụ ihe doro anya na emechara nke ọma na ihe nkiri eserese mbụ ahụ, "Na Oghere Ọ nweghị onye ga-anụ gị mkpu".
Ntughari ohuru jikọtara na isi okwu abụọ sitere n'aka Edgar Allan Poe na General William Tecumseh Sherman bụ ihe ngosi doro anya maka ihe nwere ike ịchekwa.
General Sherman kacha mara amara maka mkpọsa agha ya niile na ndịda n'oge agha obodo. Methodszọ ya bụ ibibi ma gbaa ihe niile anya na mpaghara ndị iro. Nke a nwere ike ịbụ ihe ngosi na Ripley nwere ike ime otu ihe ahụ n'ụlọ Xenomorph? Ọ bụrụ otú ahụ, anọ m kpamkpam.
Ikekwe ịkọ nrọ na ederede Poe na-atụ aka n'akụkụ ụfọdụ nke aha ikike bụ nrọ. DE ọnwụ ya na Alien 3 na usoro ihe nlere nke Mbilite n'Ọnwụ Mbilite n'Ọnwụ. Maka ndekọ ahụ, ihe nkiri niile na-atọ m ụtọ.
Gịnị ka unu chere? Olileanya Weaver na-etinye aka na ọrụ ahụ? Ka anyị mara na ihe.
Isi Iyi: (SYFI WIRE)